Fiainana tsaratsara kokoa miaraka amin'ny Smart Home OWON | Owon Technology
OWON dia mpanamboatra matihanina ho an'ny vokatra sy vahaolana Smart Home. Niorina tamin'ny taona 1993, OWON dia nanjary mpitarika ny indostrian'ny Smart Home manerantany miaraka amin'ny hery R&D matanjaka, katalaogim-bokatra complte ary rafitra mifangaro. Ny vokatra sy ny vahaolana amin'izao fotoana izao dia mandrakotra karazana maro, ao anatin'izany ny Fanaraha-maso angovo, Fanaraha-maso jiro, Fanaraha-maso ny fiarovana ary maro hafa.
OWON dia manasongadina vahaolana farany na farany, anisan'izany ny fitaovana marani-tsaina, vavahady (hub) ary mpizara rahona. Ity maritrano mihombo ity dia mahazo fahamarinan-toerana bebe kokoa sy azo itokisana kokoa amin'ny alàlan'ny fanomezana fomba fanaraha-maso marobe, tsy vitan'ny hoe miasa lavitra fotsiny ihany, fa koa amin'ny fitantanana ny seho namboarina, ny fifehezana ny fifandraisana na ny fametrahana ny fotoana.
OWON dia manana ekipa R&D lehibe indrindra ao Shina ao amin'ny indostria IoT ary nandefa ny sehatra 6000 sy sehatra 8000, mikendry ny hanafoana ireo sakana amin'ny serasera eo amin'ireo fitaovana IoT ary hanatsara ny fifandanjan'ireo fitaovana enti-miasa an-trano. Ny vavahady dia mampiasa vavahady ho ivon-toerana raha manome vahaolana (fanavaozana ny fitaovana; fampiharana rindrambaiko, serivisy rahona) ho an'ireo mpanamboatra fitaovana nentim-paharazana ho fanavaozana ny vokatra, ary koa fiaraha-miasa amin'ireo mpanamboatra trano an-trano izay misy protokolom-pifandraisana samy hafa sy manana fitaovana voafetra hahazoana ny fitaovana faran'izay betsaka mifanentana amin'ny fotoana fohy.
OWON dia manao ezaka mandroso amin'ny indostrian'ny Smart Home. Ny fikarakarana ny filan'ny mpanjifa samy hafa, ny vokatra OWON dia manaraka ihany koa ny fepetra takiana amin'ny fanamarinana sy marika avy amin'ny faritra sy firenena samy hafa, toa ny CE, FCC, sns. OWON koa dia mamokatra vokatra Zigbee Certified.
Fotoana fandefasana: Jul-12-2021